फेसबुकले सजिलाे बनाइदिएर पाे, नत्र परदेशीलाई के दसैं, के तिहार ?
साउदी अरबमा कार्यरत झापाका लिला गिरीले ९ वर्षदेखि दसैंंतिहार परिवारसँग मनाउन पाएका छैनन् । दसैं तिहारमा घर त आउन मन लाग्छ तर, भनेको समयमा रोजगारदाता कम्पनीबाट विदा नमिल्ने गरेको गिरीले साउदीबाट बताए ।
‘वैदेशिक रोजगारीका कारण ठूला चाडपर्व दसैंंतिहारसँग त सम्बन्ध नै टुटे जस्तो भयो । दैनिक फोनमार्फत परिवारसँग कुराकानी हुन्छ । ९ वर्ष भयो दसैंंतिहार परिवारसँग बसेर रमाइलो मनाउन नपाएको । त्यही भएर खासै याद आउँदैन,’ उनले भने, ‘दसैंंतिहारको समयमा कम्पनीले छुट्टी नदिँदा परिवारसँग बसेर चाडपर्व पाइँदैन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठूला चाडपर्व र आफ्नो संस्कृतिसँगै टाढा भइयो ।’ स्वदेशमै र परिवारसँग दसैंतिहार मनाउन पाउँदा बेग्लै रमाइलो हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका कारण दसैंंतिहारको त्यति वास्ता लाग्न छाडेको मलेसियामा कार्यरत ताप्लेजुङका पदम पुरी बताउँछन् । देशमा रोजगारी पाइँदैन विदेश आएपछि नेपालमा जस्तो चाडपर्व मनाउन समय नमिल्ने गरेको पुरीले बताए । ‘विदेश आएको केही वर्ष दसैंंतिहारको खुबै याद आयो । तर, अहिले त खासै वास्ता लाग्दैन । अर्कोको देशमा काम गर्न आएपछि दसैंंतिहार जस्ता चाडपर्वको महत्व हराउँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘चाडपर्वका बेला परिवारसँग नेटमार्फत कुराकारी हुन्छ । दसैंंतिहार कस्तो आउँदै छ ? कसरी मनाइयो भनेर सोधिन्छ । परिवारले चाडपर्व मनाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमार्फत हेर्न पाइन्छ ।’ नेपालमा हुँदा दसैंंतिहार खुबै रमाइलो गरेर मनाएको उनी सम्झिन्छन् ।
अध्ययनका लागि जापान पुगेका पाँचथरका सुमेश ओझाले पनि प्रदेशमा चाडपर्वको वास्ता र महत्व नहुने गरेको बताउँछन् । विदेश आएपछि पैसा कसरी कमाउन भन्नेतिर मात्र ध्यान जाँदा चाडपर्वको महत्व नहुने गरेको बताए । ‘विदेशिएपछि त परिवार र चाडपर्वसँग टाढिँदै जस्तो हुँदो रहेछ । काम सकेर साथीभाइ जम्मा हुने मौका मिल्यो भने रमाइलो हुन्छ । नत्र चाडबाडको चाहेर पनि मनाउन पाइँदैन्,’ उनले भने, ‘धेरै वर्षसम्म दसैंंतिहार परिवारसँगै बसेर मनाउन नपाएपछि त्यसको महत्व हराउँदो रहेछ । विदेशमा नेपालीको चाडपर्वको मतलब हुँदैन् । त्यही भएर पनि नेपालमा जस्तो दसैंतिहार विदेशमा लाग्दैन् ।’
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारले दसैंंतिहारजस्ता चाडपर्व काम सकेर मनाउने गरेको बताउँछन् । कामबाट छुट भएपछि साथीभाइ एक ठाउँ जम्मा भएर दसैंतिहार मनाउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । कतिपय देशमा नेपाली दूतावासहरुले टिका लगाउन व्यवस्था गरेका हुन्छन् । तर, यसपालि कोरोनाका कारण दूतावासहरुले टिका लगाउन कार्यक्रम भने राखेका छैन ।
प्रविधिले चाडपर्व जोडिदै
विगत केही वर्षयता इन्टरनेटको सुविधा र पहुँचका कारण कारण चाडपर्वको महत्वपनि बढ्दै गएको छ । इन्टरनेटमार्फत दसैंतिहारमा टिका लगाउन र ठूलाबढासँग आर्शिवाद लिने प्रचलनको विकास पनि भइरहेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको पहुँचले पनि चाडपर्व मनाउन घर आउन नपाएकाहरुलाई केही सहजीकरण हुँदै गएको छ । एक क्लिकको भरमा परिवार तथा आफन्तसँग प्रत्यक्ष कुराकानी तथा भिडियो वातालाभ गर्ने वातावरण निर्माण हुँदा कतिपय परदेशमा रहेको नेपालीलाई घरैमा भएको अनुभूति हुन्छ ।
दसैंतिहार र अन्य चाडपर्वमा सामाजिक सञ्जाल धेरैलाई परिवारसँग जोडिने अवसर मिल्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले चाडपर्वको महत्व पनि बढ्दै गएको रामेछापका सञ्जय कार्की जापानबाट बताउँछन् ।
चाडपर्व मनाएको तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत आदानप्रदान हुँदा दुवैतर्फ खुसीयालीसँग दसैंंतिहार मनाएको अनुभुति हुने सञ्जयले बताए । ‘प्रविधिको विकासका कारण दसैंंतिहारमा घरमै पुगेजस्तो हुन्छ । विदेशमा रहेका अधिकांश नेपालीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमा आफन्त तथा परिवारले चाडपर्व मनाएको तस्बिर हेरेर सन्तुष्टि लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘परदेशीको दसैंंतिहार यस्तै हो । विदेशीएपछि चाडपर्व र नेपाली संस्कृतिले छाड्छ । विदेश आएपछि पैसा र कामसँग मात्र धेरै महत्व हुन्छ ।’
हाल, वैदेशिक रोजगारीमा करिब ४४ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । जसमध्ये दसैंं, तिहार मनाउन ५ लाखभन्दा धेरै स्वदेश फर्किने गरेको सरकारी अनुमान छ । कतिपय दसैंतिहारमा स्वदेश फर्कन रहर भएपनि कम्पनीले छुट नदिँदा रोजगारदाता देशमै बस्ने गरेको छन् । यसपालि कोरोना भाइरसका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका छन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका धेरै स्वदेश फर्कन प्रतिक्षारत छन् । उनीहरुको दसैं कोरोनाका कारण कष्टमय भएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १०, २०७७, ०८:२८:००